A Wanderer's Notebook: ခံစားနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်းအနုပညာ (သို့မဟုတ်) အက်ဘောစေး ကီရာရိုစတမ်နီ ၏ "တရားဝင်မိတ္တူ"
ခံစားနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်းအနုပညာ (သို့မဟုတ်) အက်ဘောစေး ကီရာရိုစတမ်နီ ၏ "တရားဝင်မိတ္တူ"
အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကြား ခံစားနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်း သက်သက်ရယ်လို့ အက်ဘောစေး ကီရာရိုစတမ်နီ (Abbas Kiarostami) ကဆိုပါသည် ။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လို့ ဆိုရမယ့် ဇာတ်ကြောင်းဟာ ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာဦးတည်၍ ထွက်လာခြင်း ၊ စကားပြောခန်းများဖြင့် ဇာတ်အိမ်ကိုဆောက်ခြင်း ၊ အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွေးချယ်ရာမဲ့ ရပ်တည်ရတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုသရုပ်ကိုဖော်ကျူးခြင်း ၊ တစ်ဖန် ဇာတ်အသွားတင်ပြမှုမှာလည်း ဇာတ်ကျောသက်သက်က မကြာမကြာဆိုသလိုဖဲ့ထွက်ပြီး ဇာတ်ကောင်ကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို ခဏမျှ သတိပြုမိအောင် တင်ပြတတ်ခြင်း စတာတွေပါတတ်စမြဲ ။
အဓိကပြောချင်တဲ့ သူ့ရုပ်ရှင်ကတော့ ၂၀၁၀ကထွက်ခဲ့တဲ့ တရားဝင်မိတ္ထူ (Certified Copy)လို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါသည် ။ သည်ဇာတ်ကားဟာ ကီရာရိုစတမ်နီရဲ့စံအရ ယခင်ကားထွေထက် အနည်းငယ်ထူးခြားသည်လို့ ပြောနိုင်ပါ၏ ။ သည်ဇာတ်ကားဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သူ့ဇာတိရပ်ဖြစ်တဲ့ အီရန်နိုင်ငံမှာ ဇာတ်တည်ထားခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါ ။ ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်း ဥရောပအနုပညာသက်သက်ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်ရလာကြတဲ့ ကီရာရိုစတမ်နီအပါအဝင် ဒါရိုက်တာတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အနုပညာဟာ ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာ အခြေပြုတယ်လို့ ယူဆကြပြီး သည်ဖြစ်တည်မှုကို တန်ဖိုးထားကြပါ၏ ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ပရိတ်သတ်တွေ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းကပဲ သည်တစ်မူထူးတဲ့ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ရယ်လို့ တိတိပပယုံကြည်ကြသူများလည်းဖြစ်ပါ၏ ။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ပြည်ပဘာသာစကားများသုံးပြီး ရိုက်ကူးထားသည့်အတွက် ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ (တဖန် ၂၀၁၂ ကန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ တင်ဆက်တဲ့ ကီရာရိုစတမ်နီရဲ့ နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဟာ ဂျပန်ပြည်မှာ ဇာတ်တည်ထားတာဖြစ်ပါသည် ။ သည်အချက်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ "ကျုပ် အီရန်မှာ အလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူး" ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာရဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှု တစ်ရပ်ပဲလို့ ဝေဖန်ရေးသမားများ က ကောက်ချက်ဆွဲကြပါသည် ။ )
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ အရင့်အရင်ဇာတ်ကားတွေမှာ အပြင်ကနာမယ်မရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကိုသာသုံးတတ်တဲ့ ကီရာရိုစတမ်နီဟာ သည်ဇာတ်ကားမှာ ကမ္ဘာ့နာမယ်ကျော် ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဂျူးလိယက်ဘီနိုချီ (Juliette Binoche) ကို ခေါင်းဆောင်နေရာထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပါ ။ ဘီနိုချီဟာ သည်ဇာတ်ကားနဲပဲ ၂၀၁၀ ကန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု ရရှိခဲ့သည်လည်း ဖြစ်ပါသည် ။ သည်ဇာတ်ကားဟာ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ အကြိုက်တွေ့ခံခဲ့ရပြီး ရုံတင်ပြသရာမှာလည်း ကီရာရိုစတမ်နီဇာတ်ကားတွေအနက် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန်သူတွေအနေနှင့် ၁၉၅၄ ခုမှ ဂန္ထဝင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ အီတလီသို့ခရီးတစ်ခေါက် (Journey to Itlay) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြကြပါသည် ။ ( သည်ဇာတ်ကားဟာ အီတလီပြည်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်လာရင်း အစက အရာရာအဆင်ပြေနေဟန် လင်မယားနှစ်ယောက် ကတောက်ကဆဖြစ်ကြပြီး ကွားရှင်းဖို့အထိရောက်သွားတဲ့ စိတ္တဗေဒခရီးကို ဖော်ကျုးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါသည် ။ )
ဇာတ်ကြောင်းဟာ ဘာမှမဟုတ်သလိုရှိပေမယ့် ခပ်ဆန်းဆန်းပါ ။ ပြင်သစ်လူမျိုး အီတလီမှာ လောလောဆယ်နေထိုင်ဟန်ရှိပြီး ဇာတ်ကောင်နာမည်ပေးထားမခံရတဲ့ သားသည်အမေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဗြိတိသျှ အနုပညာဝေဖန်ရေးသမား တစ်ဦးနဲ့ တစ်နေ့တာတွေဆုံကြတဲ့ အကြောင်းအရာပါ ။ ဝေဖန်ရေးသမားဟာ "တရားဝင်မိတ္တူ" လို့အမည်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့စာအုပ် အီတာလျံဘာသာပြန်မိတ်ဆက်ပွဲအတွက်ရောက်လာ တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ၏ ။ ဘာကြောင့်ရယ်လို့တိတိပပ မသိရပဲ သည်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြပါသည် ။ သည်လိုနှစ်ယောက်သား မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် စကားပြောကြရင်းမှ ၊ဇာတ်တစ်ဝက်လောက်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၁၅နှစ်ကြာလက်ထပ်ထားကြတဲ့ လင်မယားအဖြစ် အထင်မှားခံရသည်ကစ အဲသည်ခံစားမှုဟာ ဆက်လက်စီးကူးပြီး အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာများကို အခြေတင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ အဆင့်ရောက်လာပါ၏ ။ သည်လိုဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးကြား ဒွိဟဖြစ်ဖွယ်ဆက်ဆံရေးကို တင်ပြရင်း သူတို့ဟန်ဆောင်တမ်းကစားနေကြတာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ခါးသီးတဲ့ ခံစားချက်ကို မေ့ဖျောက်ထားကြတဲ့ ၊ ၁၅နှစ်ကြာ အိမ်ထောင်သက်ရှိကြတဲ့ တကယ့်လင်မယားတွေလားဆိုတာ ကြည့်သူကို အတိအကျအဖြေပေးမထားပဲ ချန်ရစ်ပါသည် ။
ခံစားမိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သည်ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကတင်ပြချက်တွေလို့ ကျတော်ယူဆတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အစစ်နှင့် မိတ္ထူအကြားတန်ဖိုးထားမှု ကွာခြားပုံ ၊ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် အဆိုးမြင်စိတ် ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှု ၊ ကိစ္စတစ်ရပ် အပေါ်အဘက်ဘက်မှ ရှုမြင်သုံးသပ်တင်ပြခြင်းဖြင့် ပို၍သိသာစေသော အမြင်တစ်ရပ်ကို ဖော်ကျူးခြင်း စတဲ့အချက်တွေပါ ။ သည်အချက်တွေ အပေါ် နားလည်မိသလို သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမယ် ။
ရုပ်ရှင်တစ်ကားဟာ အမှန်တရားအတွက် မေးခွန်းထုတ်စေခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ဆိုကြပါသည်။ သည်အတိုင်းဆို သည်ရုပ်ရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မေးခွန်းများစွာကို ချန်ထားရစ်ပါသည်။ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိရာမှာ ဘယ်အပိုင်းဟာ အဖြစ်မှန်လဲ ၊ ဇာတ်ကောင်နှစ်ဦး စလုံးမှာ ဘယ်သူက ဟန်ဆောင်ဆော့ကစားနေကြတာဖြစ်မလဲ ၊ နှစ်ဦးစလုံးပဲလား ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပြိုက်နက်ဖြစ်တည်မယ့် စုံတွဲနှစ်တွဲကို တစ်တွဲထဲမှာ ပူးကပ်ပြီးတင်ပြချင်တာလား ၊ ဇာတ်လမ်းအစမှာ ပြောခဲ့တဲ့ မူရင်း ကော်ပီ အပေါ်တန်ဖိုးထားမှု ခြားနားခြင်းကိစ္စတွေဟာ ဇာတ်တစ်ခုလုံး ကို ဘယ်လိုကိုယ်စားပြုချင်တာလဲ။ မေးခွန်းတွေဟာ ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိ ။ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကီရာရိုစတမ်နီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မိတ္တူအကြောင်း အခုလို သူကဖြေပါသည် ။
မိတ္တူတစ်ခုဟာ မူရင်းနဲ့တော့ တစ်ထပ်ထည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ ။ တန်ဖိုးထားပုံခြင်းလည်း တူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း မိတ္ထူဟာတန်ဖိုးမဲ့တယ်ရယ်လို့တော့ ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ပြန်ဘူး ။ မိတ္တူတစ်ခုရှိခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးဟာ မူရင်းကိုညွှန်ပြပေးနေလို့ပဲ ။ မူရင်းဆိုတဲ့ စံဟာရှိရမယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုအပေါ်မူတည်သေးတာပဲကိုး ။
သည်အဖြေကို ကျွန်တော်တို့ တွေးကြည့်ရမယ်ဆို မိတ္တူဆိုတာ ကိုယ်မရနိုင်တဲ့ အစစ်ရဲ့ အရိပ်အယောင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့ ရနိုင်ပါသည် ။ တန်ဖိုးထားမှုအပေါ် မူတူတည်ပြီး မိတ္တူတစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ လူကိုလိုက်ပြီးကွဲလွဲနိုင်ပါသည် ။ သည်အချက်ကို ဇာတ်ကားမှာ အမျိုးသမီး၏ ညီမဖြစ်သူ့အကြောင်း စကားစပ်ပြောခန်းမှာ တွေ့ရပါသည် ။
ကိုယ့်အထင် မင်းခဲအိုမှာ ပြစ်ချက်တွေရှိနိုင်ပေမယ့် သူဟာ မူရင်း (စံပြ)ပဲ .. ဘာကြောင့်လဲဆို မင့်ညီမက သူကို မူရင်းအဖြစ်ပဲမြင်တာကိုး ။
သာမန်အားဖြင့်ပြောရရင် လူတိုင်း တင်ပြပုံအရ စုံတွဲတွေတိုင်းဟာ စံအဖြစ်တည်နေတဲ့ မူရင်းကိုပဲမျှော်မှန်းတတ်ကြသည် ။ သည်အတွက်ပဲ အနုပညာသဘောအရ မူရင်းနှင့် မိတ္တူတို့ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုသဘောကို လူသားတွေရဲ့ဆက်စပ်ပက်သက်မှုသဘောတရားနှင့် ထင်ဟတ်ပြတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါမယ် ။ ဒါကြောင့်ပဲ ခုမှတွေ့ကြတဲ့ စုံတွဲဟာ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ၁၅နှစ်ကြာလက်ထပ်ထားတဲ့ စုံတွဲနှင့် ထပ်တူ ခံစားနိုင်မယ်လို့ ထင်မြင်ကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။ လူတွေဟာ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို သူတို့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းယုံကြည်ပြီး ချဉ်းကပ်တတ်ကြပါသည် ။ သည့်အတွက်လည်း အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကြား ခံစားနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်း သက်သက်ရယ်လို့ ဖန်းတီးသူကဆိုပါသည် ။ လူသားချင်း ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုတိုင်းတွင် တာဝန်သိမှုရှိရပါမည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်လျှင်မြင်ချင်း ကျွန်တော်တို့သည် သည်လိုဆက်နွယ်မှုကို ဘယ်လောက်ပင် တန်ဖိုးမဲ့ပါစေ မူရင်းစံတစ်ခုအဖြစ်မြင်တတ်ကြသည် ။ သည်လိုယုံကြည်ပြီး စွဲကိုင်တတ်ကြသည် ။ သို့သော် ကြာလာတာနဲ့အမျှ သည်အမြင်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာပြီး မိတ္တူကို မိတ္တူအဖြစ်နဲ့ပဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း မြင်တတ်လာပါသည် ။ အဖြစ်မှန်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပါသည် ။ သည်လိုနဲ့ပဲ အမှန်တရားပေါ်လာခဲ့ပြီး လက်ခံဖို့ငြင်းဆန်ရင်း လူသားဆက်ဆံရေးဟာ ပျက်သုန်းတတ်ကြစမြဲမဟုတ်ပါလော။
နောက်မြင်သာထင်ရှားတဲ့ တင်ပြချက်တော့ အိမ်ထောင်ရေး (လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း နှင့် သားသမီးပွားစီးခြင်း ကိစ္စနှစ်ရပ်စလုံး ) အပေါ် အဆိုးမြင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည် ။ ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်တို့ အလည်သွားကြတဲ့နေရာဟာ ကြင်စဦးမောင်နှံတို့ သစ္စာပြုတိုင်တည်ရာ၊ အလှဓာတ်ပုံရိုက်ရာ မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပါသည်။ သည် ချစ်သစ်စမောင်မယ်များကို ဖြတ်သွားတွေ့ကြုံရင်း အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် အဆိုးမြင်စိတ်ကို ဇာတ်ကောင်အပြောတွေနဲ့ချပြသွားပါသည် ။ ကြင်စဦးမှာဖြစ်တည်တဲ့ အချစ်ဒီရေသစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုဟာ တကယ့်အိမ်ထောင်ရေးဘဝမှာ ဘာမှအသုံးမဝင်ကြောင်း ၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်တာ ဇနီးမယားပေါ် ၊ ခင်ပွန်းအပေါ် ၊ သားသမီးအပေါ် အလိုမကျရမှုများ ၊ မိသားစုဝင်အချင်းချင်းနားလည်မှု ပျောက်ဆုံးခြင်း ၊ အဖိုသတ္တဝါတွေရဲ့ အလုပ်အပေါ်တစ်စိုက်မက်မက်ရူးသွပ်မှု နှင့် အမများအတွက် ဖိုသတ္တဝါ၏ဖေးမနားလည်ပေးမှု ယုယချစ်တုန့်တင်ခံရမှုကို မျှော်စောင့်ရတဲ့ ဝိရောဒိ စတာတွေကို တစ်ကားလုံး စကားပြောခန်းတွေနဲ့ အထင်အရှားပြသွားပါသည် ။
"ကျွန်တော့်မိသားစုဟာ သူတို့ဘဝနဲ့သူနေကြတယ် ၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ နေတယ် ။ သူတို့လည်း သူတို့ဘာသာစကားကိုပြောကြမယ် ... ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်ရဲ့သာသာစကားကိုပဲပြောမယ် .. ဒါဟာနားလည်ပေးလို့ ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား..."
"ဟုတ်တယ် ရှင်က ရှင့်ဘဝနဲ့နေတယ် ၊ သူက(သားဖြစ်သူကို ရည်ညွှန်း) သူ့ဘဝနဲ့နေတယ် ... ခက်နေတာက ရှင်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ကျွန်မဘဝကို စွက်ဖက်နေကြတာပဲ..."
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကီရာရိုစတမ်နီရဲ့ ရုပ်ရှင်ဗေဒ ၊ ဇာတ်သွားအလာတင်ပြမှုဗေဒနဲ့ ပတ်သက်ပါသည် ။ တစ်ကားစလုံးကို အရောင်၏ ဘက်ညီမှုအချိုး ၊ နောက်ခံဒေသ အလှအပများ ၊ မြောက်မြားစွာသော နိမိတ်ပုံ ရိုက်ချက်များနဲ့ တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ frame တစ်ခုကအကြောင်းပြောချင်ပါသည် ။
မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြလေ့ရှိသော နေရာတစ်ခုမှာ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ စုံတွဲကိုပြရင်း frame ရဲ့တစ်ခြမ်းဘက်မှာ ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ရယ်မသိ မျက်ရည်ကျနေတဲ့ သတို့သမီးတစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စောင့်နေတာကိုပြတဲ့ အခန်းပါ ။ သည်အခန်းမတိုင်ခင်က ဇာတ်ကောင်အမျိုးသားဟာ အိမ်ရာထူခြင်းရဲ့ တဒင်္ဂပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ၊ နောက်ကြာရှည်စွာ စိတ်ညစ်ညူးရမယ့်အကြောင်းကို ဦးစားပေးပြောနေခဲ့ပြီး ၊ သူ့ကိုအတင်းလားခေါ်တဲ့ မင်္ဂလာစုံတွဲနဲ့ အတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်နေဆဲမှာ... သည် ငိုနေတဲ့သတို့သမီး (ဘာကြောင့်ရယ်လို့လဲမသိရ) ကို တည့်သွင်းရိုက်ပြတာဟာ ခံစားသူကို ထိထိရောက်ရောက်ကြီး ထိုးနှက်နိုင်ပါသည် ။
တစ်ဖန် အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးကြား နားလည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဖက်ဘုရားကျောင်းက တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမှီတွယ်ထွက်လာတဲ့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားကို ( အချစ်ကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ မြင်ယောင်တတ်တဲ့ မူရင်းစံပြနိမိတ်ပုံ ) တွဲပြတဲ့ အခန်း စတာတွေကလည်း ထိရောက်မှုရှိလှပါသည် ။ တဖန် ဇာတ်သိမ်းခါနီးမှာ လှေကားရင်းမှာထိုင်ရင်း မိန်းမလုပ်သူက အမျိုးသားကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က မင်္ဂလာဦးမှာ သူတို့တည်းခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်လေးကို မှန်းပြီးပြောကြည့်ဖို့ ပူဆာသည် ။ အမျိုးသားက စိတ်မပါတပါနှင့် ဟိုသည်ညွှန်ပြရင်း အမှန်ကတော့ သူတို့ထိုင်နေတဲ့ လှေကားထက်က နေရာဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရ၏ ။ ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ လျစ်လျူရှုတတ်သည့် ၊ မမြင်တတ်သည့် လူသားဆန်တဲ့ အားနည်းချက်တစ်ရက်ကို ဖန်တီးသူက ပါးပါးလေးပြသွားခြင်းလို့ ခံယူမိပါသည် ။
"တရားဝင်မိတ္တူ" ဟာခံယူသူ့အပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ယူပုံ ၊ သက်ရောက်ပုံတွေ မျိုးစုံဖြစ်မည်လို့ ယုံကြည်ပါသည် ။ ဒါသည်ပင် အနုပညာတစ်ရပ်ရဲ့ စွမ်းအားမဟုတ်ပါလော ။ ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တွေ၏ ပညာကိုလည်း တအံတသြတွေ့ရပါသေးသည်။ အထူးသဖြင့် အဓိကဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သော ဂျူးလိယက်ဘီနိုချီ၏ မျက်နှာအမူအရာ ၊ ကိုယ်ဟန် စသည်တို့မှာ သရုပ်ဆောင်အနုပညာ၏ အကောင်းဆုံးအဆင့်ဟုပင်ပြောနိုင်ပါသည် ။ သည်ရုပ်ရှင်နဲ့ ကီရာရိုစတမ်နီဟာ ဘဝ၊ အနုပညာ ၊ အချစ် ၊ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ စတာတွေကို အစွန်းကုန်ချပြသွားပါသည် ။ အားလုံးကိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါ ။ သို့တိုင် ဘဝဖြစ်တည်မှုရဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ၊ စံအဖြစ်ထားချင်ကြတဲ့ အချစ်ရဲ့ လက်တွေ့သဘောအရ မတည်ရှိမှု ၊ ကြေမွပျက်ပြုန်းလွယ်တဲ့ လူသားချင်းဆက်ဆံရေး ၊ အဆိုးဆုံးခါးသီးမှုများမှာတောင်မှ တစ်ဒင်္ဂအားဖြင့်ကြည်နူးရမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူကိုသတိရနိုင်သေးခြင်း ၊ ချစ်သူရဲ့ သက်ပြင်းတစ်ရှိုက် ၊ ပုခုံးပေါ်လာတင်တဲ့ လက်တစ်ဖက်ရဲ့အားအင် စတဲ့ သေးဖွဲတဲ့အပြုအမူတွေရဲ့ အားကြီးတဲ့ စွမ်းအား စတာတွေကိုတော့ သိမြင်နိုင်ပါသေးသည် ။ သည်ဇာတ်ကားဟာ အနုပညာစစ်စစ်လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တကယ့်ဘဝရဲ့ ခံစားမှုဝေဒနာကို ထင်ဟပ်ပြနိုင်တဲ့ တရားဝင်မိတ္တူတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြန်ပါသည် ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံယူသူကျွန်တော့်အဖို့ မမေ့နိုင်သော စကားပြောတစ်ခွန်း ကိုပြောပြချင်ပါသည် ။ ယင်းမှာ ကော်ဖီဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီး၏ အိမ်ထောင်ရေးလက်ချာ ရှည်ကြီးမှာ တစ်ခွန်းဖြစ်ပါသည် ။ သူပြောတာက တိုတိုလေးပဲဖြစ်သည် ။
" စံတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်း မင်းဘဝကို ဖြုန်းတီးမပစ်ပါနဲ့ .. ၊ ဒါဟာ ထုံလွန်း တုံးလွန်းရာ ရောက်ပါတယ်... "
(ဇူလိုင် ၂၇ ၊ ၂၀၁၂ ။ 2:32AM)
1. "Certified Copy: At Home and Abroad" By Godfrey Cheshire
2. "Ceritifying the Copy; An interview with Abbas Kiarostami" by Aaron Cutler
Posted by Aung Phyoe at 01:45
Labels: ရုပ်ရှင်အညွှန်း, ဆောင်းပါး
ခံစားနားလည်မှု လွဲချော်ခြင်းအနုပညာ (သို့မဟုတ်) အက်ေ...
မပို့ဖြစ်သော သိမ်းထားသည့်စာတစ်စောင် ၂